Tuulooyinka Soria, mucjisooyinka Spain laga xaalufiyey | Wararka Safarka
Magaalooyinka Soria waxay ka tirsan yihiin waxa loogu yeero "Isbaanishka waa la xareeyay" laakiin kama ay lumin codsigooda arrintaas. Xaqiiqdii, magaalooyinkan qaar waxay kamid yihiin kuwa ugu quruxda badan dalkeena waxayna kugu muteysteen inaad soo booqato.
Kuwani waa magaalooyin taariikh wanaagsan leh sida Medinaceli, goobta dagaalada halyeeyada sida Calatanazor ama ku yaal deegaan dabiici ah oo aan macquul aheyn oo culeyska culeyska ka qaada sida rello. Si sax ah quruxda muuqaalkeeda iyo weynaanta taallooyinkeeda ayaa ah meelaha ugu soo jiidashada badan ee magaalooyinka Soria ay ku siinayaan. Haddii aad rabto inaad iyaga ogaato, waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad sii wadato akhriska.
1 Tuulooyinka Soria, safar dib ugu soo noqday waqtiga
1.1 Burgo de Osman
1.2 Calatañazor, dagaal halyeey ah
1.3 Berlanga de Duero, jawi dabiici ah oo cajiib ah
1.4 Medinaceli, oo ah jawharad kale oo ka mid ah magaalooyinka Soria
1.5 Rello, oo ah meel aan macquul ahayn
1.6 Yanguas, oo layaab ku noqotay magaalooyinka Soria
Tuulooyinka Soria, safar dib ugu soo noqday waqtiga
Waxyaabo badan oo dhaxalgal ah ayaa ku yaal magaalooyinka Soria in booqashadoodu u egtahay safarka waqtiga. Dhammaantiin kuma wada tusi karno hal maqaal. Laakiin ku kalsoonow in kuwa aan arki doonno ay ka mid yihiin kuwa ugu quruxda badan gobolka Soria naftooda.
Burgo de Osman
Magaaladii Hore ee Episcopal iyo Dhisme Faneed Taariikhi ah Tan iyo 1993, Burgo de Osma wuxuu kuu soo bandhigayaa qurux Plaza Mayor Qarnigii XNUMXaad. Laakiin sidoo kale waa inaad booqataa quruxdeeda Kaniisadda Saint Mary ee Maskaxda, oo leh bogga Gothic ee cajiibka ah. Sidoo kale qurux waa Isbitaalka Hore ee San Agustín, taas oo soo saarta tusaalaha Alcázares de los Austrias.
Isbitaalka Hore ee San Agustín
Dhanka kale, Jaamacadda Santa Catalina Waa dhisme qurux badan oo Plateresque ah oo hadda loo beddelay hudheel. Iyo, duleedka magaalada waxaad haysaa haraaga a qalin taas oo ka talinaysa aagga munaarad ilaalin ah. The kaniisadda Santa Cristina Waa dhismo qurux badan oo Romanesque ah iyo Seminary ka mid ah Santo Domingo de Guzmán waa shaqo neoclassical ay sabab u tahay Francesco Sabati.
Laakiin mid ka mid ah astaamaha Burgo de Osma ayaa ah Isha daanyeer, oo aad ka mari karto jidadka arcad-darrada leh ee qaabeeya guryaha naqshadaha caanka ah. Sidoo kale villa ayaa leh Buundada Roman webiga Ucero. Ugu dambeyntiina, magaaladani waxay ka mid tahay waddooyinka loo maro Wadada Cid, gaar ahaan qaybta loo baabtiisay sida 'El Desierro'.
Calatañazor, dagaal halyeey ah
Magaalada yar ee Calatañazor sidoo kale waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan Soria, laakiin waxaa caan ku ah dagaalkii halyeeyga ahaa ee, sida la yiri, "Almanzor wuu lumay durbaankiisii". In kasta oo aan la hubin in dagaal noocaas ah uu dhex maray ciidammada hoggaamiyaha Muslimiinta iyo kuwa Sancho García, haddana waxay u muuqataa inay hubaal tahay in Almanzor uu aakhirkii cararay oo uu ku dhintay magaalada u dhow ee Medinaceli, oo aan gadaal ka hadli doonno.
Calaamadaha kale, Calatañazor wuxuu leeyahay dhaxal qurux badan. Isaga qalin, oo aan sifiican loo ilaalin oo laga soo bilaabo qarnigii afar iyo tobnaad. Laakiin, ka sarreeya dhammaantood, iyagu guryaha magaalada, ee dhismayaasha qarniyadii hore waxayna ku yaalliin waddooyinka isku xira. Waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad aragto magaaladan oo barafaysan waqtiga kaniisadaha San Juan iyo Nuestra Señora del Castillo.
Laakiin Calatañazor si isku mid ah ayuu caan ugu yahay juniper, keymo juniper ah oo cajiib ah oo sameeya mid ka mid ah keydadka dabiiciga ee ugu weyn gobolka Soria.
Berlanga de Duero, jawi dabiici ah oo cajiib ah
Berlanga sidoo kale waxay leedahay meel dabiici ah oo cajiib ah. Waxay ku saabsan tahay Dhererka Barahona oo ah dhul aad u baaxad weyn oo ka mid ah dhagaxa kalgacalka leh iyo noocyada soo jireenka ah ee lagu dhawaaqay Goobta Danta Bulshada y Aagga Gaarka ah ee Shimbiraha.
Iyada oo ay weheliso layaabkan dabiiciga ah, Berlanga de Duero wuxuu ku siinayaa adiga cajaa'ib qalin laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad iyada oo derbiyadeeda leh. Oo waxaad sidoo kale booqan kartaa kan quruxda yar Kaniisada Kuliyada ee Santa María del Mercado, ee qaansheegadka Renaissance in kasta oo meesha allabariga ee Alfa-weynta loo yaqaan 'Churrigueresque'; ah Qasriga Marquis ee Berlanga, si isku mid ah Renaissance; ah Paredes Albas convent iyo Hermitage of Our Lady ee kalinimada.
Medinaceli, oo ah jawharad kale oo ka mid ah magaalooyinka Soria
Socdaalkayaga magaalooyinka Soria, waxaan ku gaarnay Medinaceli, oo isku darsaday hidaha waaweyn iyo meelaha dabiiciga ah ee cajiibka ah. Dahabkan dhabta ahi wuxuu leeyahay hadhaagii Roomaanka ee muhiimka ahaa sida seddex geesood iyo mosaicsiga fagaaraha St. Peter.
Laakiin sidoo kale waxay leedahay qiimo qaali ah Plaza Mayor la socota Qasriga Ducal Habka Renaissance iyo Alhondiga Qarnigii XNUMXaad. Cajiibka ah Kaniisada Collegiate ee Santa María de la Asunción, haraaga a qalin iyo kaniisadda Santa Isabel.
Qasriga Ducal ee Medinaceli
Sidoo kale, hareeraha Medinaceli waa Dhul Layna, Kaas oo waliba ah Goobta Danta Bulshada y Aagga Gaarka ah ee Shimbiraha. Laakiin, marka lagu daro, moorkan ayaa ah goobta qadiimiga ah ee qadiimiga ah Pelado Hill, oo ku taariikheysan Pliocene-ka Hoose.
Rello, oo ah meel aan macquul ahayn
Magaaladaan si fiican looma yaqaan magaalooyinkii hore, laakiin wali wey mudan tahay booqasho. Waa tuulada dhexdhexaadka ah kaas oo ku yaal dusha sare. Sidaa darteed, dhammaantood waa taallo. Xaqiiqdii waxay haysaa cinwaanka Hantida Danta Dhaqanka. Laakiin waxay iftiiminayaan kaniisadda Our Lady of Assumption, ka hermitage ee Las Angustias iyo Munaaraddii Tiñón, waardiye qarnigii XNUMXaad ilaalin jiray marinka wabiga Duero.
Yanguas, oo layaab ku noqotay magaalooyinka Soria
Xitaa wax ka yar sidii hore ee wareegyada dalxiiska waa Yanguas, taas oo, si kastaba ha noqotee, waa wax la yaab leh oo dhab ah. Oo ay ku xeeran yihiin soo rogid meel bannaan oo dabiici ah oo ka mid ah Bangiyada webiga Cidacos iyo wabiyada, Sierra de Cameros, Yanguas wuxuu leeyahay dhaxal qaali ah oo taariikhi ah.
Isaga ayaa ka kooban qalin, qalcaddii dhexe ee qarnigii XNUMXaad; ah irdaha Wabiga iyo Villa, hadhaagii darbigii hore, iyo kaniisadda San Lorenzo, yaabab Gootic goor dambe. Laakiin sidoo kale kaniisadda Santa Maria, oo la dhisay qarnigii XNUMXaad; ah Aqalka Magaalada ee XVIII; ah Munaaradda San Miguel iyo buundada dhexe webiga Cidacos.
Iridda Wabiga Yanguas
Dhinaca kale, hareeraha Yanguas meelaha xiisaha leh ee cilmiga dhirta sida kan Muga-ga, halkaas oo aad ka arki karto lacag dhigaal ah Raadinta xayawaan qiroweyn.
Gabagabadii, waxaan ku tusnay qaar ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan Soria. Laakiin waxaa jira kuwa kale oo badan oo la mid ah Magana, oo leh qalcaddeeda Nava del Marqués iyo kaniisadda Gothic ee San Martín de Tours; Oncala, oo kaniisaddeeda San Millán ay ku taal ururinta cajiibka ah ee toban xarig oo Flemish ah, ama Vinuesa, oo leh buundadeeda Roman iyo quruxdeeda Lagoon madow. Miyaanad dareemayn inaad ku tamashlaynayso gobolkan quruxda badan ee Isbaanishka?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Getaways » Magaalooyinka Soria
Waxa laga sameeyo Cuzco (Peru): waa hage wax ku ool ah oo ku saabsan booqashadaada magaalada